Xildhibaano ka hadlay dhalinyaradii lagu laayay deegaanka Gololey, kuna baaqay in baaritaan degdeg ah - Jowhar Somali news Leader
Home News Xildhibaano ka hadlay dhalinyaradii lagu laayay deegaanka Gololey, kuna baaqay in baaritaan...
Xildhibaano ka hadlay dhalinyaradii lagu laayay deegaanka Gololey, kuna baaqay in baaritaan degdeg ah
Xildhibaano ka tirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ayaa ka hadlay dhacdadii maanta ee deegaanka Gololey, halkaasoo lagu dilay illaa 8 wiil dhalinyaro ahaa oo ka shaqeynayay xarun caafimaad ku taalla deegaanka.
Dhalinyaradan ayaa ahaa kuwo wax bartay oo si gaar ah uga howlgalayay xarunta MCH-ka deegaanka Gololey oo ay maamusho Hey’ad Maxalli ah oo lagu magacaabo Zamzam Foundation, waxaana la afduubtay shalay duhurkii, iyadoo maanta meydkooda la soo dhagay agagaarka deegaanka Gololey ee ka tirsan degmada Balcad.
Xildhibaan Mahad Salaad ayaa sheegay in falkaas ay aad u cambaareynayaan, isla markaana ku baaqay in cadaalad la horkeeno ciidamadii ka dambeeyay xasuuqaas.
Sidoo kale Xildhibaan C/raxmaan Odawaa oo ah Xoghayaha Guud ee Madasha Xisbiyada Qaran ayaa sheegay in arrinta ka dhacday deegaanka Gololey ay tahay halis halisteeda leh oo u baahan wax ka qabasho degdeg ah.
“Dilka lagula kacay sagaal wiil oo shalay dad ku labisan dharka ciidamada dowladda Federaalka ay ka wateen deegaanka Gololeey oo maanta la keenay ayaga oo mayd ah, waxa ay u baahantahay baaritaan dagdag ah iyo waliba in dadkaasi cadaaalad helaan, Dhalinyaradaas qaar ka mid ah waxa ay ka shaqeynaayeen xarun caafimaad oo ku taal deegaankaas”ayuu yiri C/raxmaan Odawaa.
Sidoo kale waxaa uu ugu baaqay Taliyaha Ciidanka xoogga dalka, Wasiirka Gaashaandhigga, Ra’iisul Wasaaraha iyo Maamulka Hirshabeelle inay cadaalada horkeenaan cidii ka dambeysay xasuuqa dhalinyaradaas.
Dadka deegaanka Gololey ayaa sheegaya in Ciidamo labisnaa dareyska Ciidanka Milateriga oo wajiga iska qariyay, ayna lahaayeen calaamadihii ciidanka dowladda ay afduubteen dhalinyaradan, lana aadeen goobo ka baxsan deegaanka, gelinkii dambe ee maantana la arkay meydadka raggan